Feejignaan Naxdin Leh Maxaa Soo Socda Xfce 4.12 | Laga soo bilaabo Linux
Feejignaan Naxdin Leh Maxaa Soo Socda Xfce 4.12
Rayonant | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, GNU / Linux, Noticias
Toddobaadkan, warar aad u xiiso badan oo ku saabsan horumarinta qaar ka mid ah codsiyada Xfce ee wareegga 4.12 ayaa soo ifbaxday, taas oo i siisay fikrad ah inaan soo koobo sida horumarka guud ee uu u socdo ku saleysan yahay wararka iyo khibradeyda maxaa yeelay Waxaan u isticmaalaa xirmooyinka horumarinta noocyo kala duwan oo loo maro ppa.
Xusuusnow in xilligan baakadaha ay wali ku jiraan tijaabinta laguguma talinaynin jawi deggan maadaama ay soo bandhigi karaan khaladaad, hase yeeshe kuwa doonaya inay caawiyaan baaritaanka iyo ka warbixinta khaladaadka dhammaan koodhku wuxuu ku jiraa mashruuca GIT bogga, loogu talagalay dadka isticmaala Xubuntu waxaa jira horumariya ppa laakiin xusuusnow inay lagama maarmaan tahay in horey loo helo Xfce 4.10
1.0.2 Liiska ciyaar
5 Gawaarida furayaasha
6 Taageero Dhalad ah oo loogu talagalay Xaaladda Dheeraadka ah ee Qaabdhismeedka Moodhalka Badan
Ciyaartoyga warbaahinta ee Xfce wuxuu ku soo baxay nooc cusub oo aan kaliya hagaajinayn cayayaanka qaarkood (sida qaboojinta qoraallada qaar ee igu dhacay badanaa) laakiin sidoo kale dhowr astaamo oo cusub:
Taariikhda feylasha iyo goobaha
Ogaanshaha iyo rakibidda koodhadh maqan
Soo rar subtitles khaas ah (markii hore waxay ahayd kaliya suurtagal in la dhigo isla magaca fiidiyow isla goobta)
Taageerada liistada CD iyo DVD
Qalabka ogeysiiska cusub
Muuqaal cusub oo loogu talagalay ciyaarista qaabab maqal ah
Qaab cusub oo gundhig ah oo loo adeegsado tusaale ahaan daalacayaasha shabakadda (sida lagu sameyn karo Totem ama Xine, laakiin kiiskan waa in laga sameeyaa mozplugger)
Sii-dayn sharafeed oo ku jirta aragtida maqalka ee loo yaqaan (iska indha khaladaadka tarjumaadda, hagaajinta ayaa la dirayaa)
Qaabeynta loo gudbiyay Xfconf
Hagaajinta toobiye kiiboodhka
Ctrl + O Wadahadal Furan
Ctrl + L Fur Wadahadalka Goobta
Ctrl + Q Ka bax sii-daynta sharafeed
F9 Tus / Qari Liistada ciyaarta
Kor iyo hoos Raadso Liiska Ciyaarta
F11 Gali Shaashad Buuxda
cararidda Ka Bax Shaashad Buuxda
Bidix midig Raadinta Dhexe Dib / U sii wad 10 ilbidhiqsi
Ctrl + Bidix / Midig Raadinta Dhexe Dib / U sii wad 1 daqiiqo
0 (eber) Codka
- (ka yar) Hoos u dhig mugga
+ (lagu daray), = (loo siman yahay) Kordhi Volume
Waxaad ku arki kartaa sharraxaad ballaadhan oo ku saabsan astaamaha cusub iyo shaashaddo dheeri ah oo ku jira Blog Sean Davis kaasoo si adag uga shaqeeyay mashruucan. oo wuxuu kaloo sameynayaa dhowr waxyaalood oo kale maadaama uu ka shaqeynayo naqshadeynta biraawsarka kalluunka loo yaqaan 'catfish file browser' oo uu ku darayo xoogaa awood u leh wax ka beddelka liiska. MenuLibre (taas oo ah mashruucaaga sidoo kale) taasi waxay waxtar badan u lahaan lahayd jawiyada sida Xfce iyo Lxde
Muuqaal yar oo ka mid ah naqshadaynta kalluunka kalluunka
Tifatiraha qoraalka mashruuca ayaa soo laabtay waqti dheer kadib (kudhowaad 4 sano) kaas oo horumarkiisa loo tixgeliyay inuu kudhowaad dhintay, xusuusnow in Mousepad ku saleysan Leafpad loo sameeyay si loo bixiyo taageero daabacaad oo kan dambe uusan laheyn waqtigaas. Oo hadda nooca 0.3.0 wuxuu la yimaadaa wararka soo socda:
Dib-u-qoris dhameystiran oo Mousepad ah. Koodhka hadda waxaa lagu qoray GObjects si loo helo aasaas adag oo horumar dheeraad ah.
Daaqado badan oo hal tusaale ah
Taageerada jiidaya iyo hoos u dhigida qoraalka dukumintiga dhexdiisa, inta udhaxeysa tabsyada iyo daaqadaha, iyo sidoo kale furitaanka feylasha adoo jiidaya daaqada gudaheeda.
Taageero loogu talagalay tabs badan oo daaqad ah, kuwaas oo dib loo habeyn karo lana saari karo.
Taageerida faylalka ugu dambeeyay dib ayaa loo hirgaliyay. Taariikhda dhow waa la nadiifin karaa, feylkana waa laga saarayaa markii Mousepad uusan awoodin inuu furo.
Taageerada xawaareyaasha wax laga beddeli karo
Muujinaya qaab dhismeedka noocyo badan oo faylal ah.
Taageerada naqshadaha midabka (sida Gedit)
Baarka xaaladda oo leh nooca feylka, meesha tilmaanta iyo haddii dib loo qoro karti.
Ku shubista feylal badan hal mar wadahadalka furitaanka iyo khadka taliska.
Raadi oo muuji sida aad u qorto (ala Firefox)
Mousepad 0.3.0 oo leh astaamo cusub oo ay kujiraan qorshahayga midabka ugu xiisaha badan ee Halmaanka
Xfce emulator terminal sidoo kale wuxuu la yimaadaa xoogaa isbeddelo ah, tifaftiraha kumbuyuutarka kumbuyuutarka ayaa laga saaray xulashooyinka si uu u adeegsado dardargelinta wax laga beddeli karo ee menu-ka ee maareeya deegaanka si loo beddelo tuubbooyinka codsiyadaada (Thunar tusaale ahaan) iyo awoodda wax-ka-beddelka toolbar kaas oo u saamaxey in meesha laga saaro ku-tiirsanaanta qaarkood. Intaas waxaa sii dheer, muuqaal aniga ii xiiso badan ayaa ah inay hadda yeelan doonto 'hoos-u-dhac' ama qaab-hoos u dhac ah qaabka Yakuake! Xayaysiiska waa la arki karaa Halkan
Xfce's terminal la geyn karo qaabka Yakuake iyo wixii lamid ah
In kasta oo aysan ahayn war toddobaadkan horumarka Thunar ka dib isbeddelka weyn ee ku yimid nooca 1.6 iyadoo la adeegsanayo soo bandhigista tabku ma istaagayo, dhowr cayayaanka ayaa la hagaajiyay maadaama ay hadda suurtagal tahay in la arko guryaha dhowr fayl isla waqtigaas, dhammaantood Qaybaha ayaa lagu soo bandhigayaa dhinaca dhinaca xitaa haddii lagu dhejiyay fstab.
Marka lagu daro dib u qaabeynta gudiga calaamadaha iyo awooda lagu keydin karo calaamadaha shabakada, sidaa darteed Gigolo mar dambe lama huraan u noqon doono, iyo sidoo kale is dhexgalka gphoto oo bixiya taageero ka wanaagsan qalabka Android iyo kaamirooyinka.
Intaa waxaa sii dheer, nooca cusub ee Tumbler ayaa la sii daayay, kaas oo hadda taageera faylka qaabeynta si loo xakameeyo mudnaanta, meesha cabirka feylka ee adeegsadeehu adeegsado, iyo muuqaal xiisa leh oo dheeri ah, isagoo awood u leh inuu ku helo daboolka thumbnails ee filimada API ah Macluumaadka Filimka Furan o Filimka DB , inkasta oo ay naafo u tahay asal ahaan sababta oo ah waxay isticmaashaa macluumaad (Cinwaanka filimka ee ay ka soo saarto magaca faylka) si loogu diro khadka tooska ah sidaasna lagu helo boodhadhka.
Macluumaadka la soo diray waa mid aan dhib lahayn, laakiin inay ahaadaan kuwo qarsoodi ah waxay go'aansadeen inay ugu fiican tahay isticmaalaha inuu go'aansado. Wixii macluumaad dheeraad ah ka eeg bogga wiki.
Thunar tabs iyo dib loo qaabeeyey
Shaqada ayaa sidoo kale la qabtaa si loo hagaajiyo maaraynta furayaasha kumbuyuutarrada, gaar ahaan khaladaadka khaladaadka qaarkood ee ka imanaya hirgelinta nooca 4.10 iyo in la sameeyo calaamadaha lagu akhrin karo interface-ka, maaddaama ay la soo bixi jireen magacooda nidaam [Super, Primary]
Taageero Dhalad ah oo loogu talagalay Xaaladda Dheeraadka ah ee Qaabdhismeedka Moodhalka Badan
Xfce-ka cusub wuxuu hadda hirgelinayaa taageerada qaabeynta qaabab badan oo kormeer ah sidaa darteed hadda kadib lagama maarmaan noqon doonto in la isticmaalo qalab dheeri ah sida Arandr si loo sameeyo qaababkan Wadahadalka ugu horreeya waxaa la muujiyaa marka shaashad cusub ay ku xiran tahay oo si dhakhso leh u siineysa afarta nooc ee ugu isticmaalka badan:
Muujinta Dejinta Dialog
Haddii qaabeyn kale loo baahdo, waxaa lagu heli karaa adigoo gujinaya Advanced meesha isku xirnaanta shaashadda caadiga ah lagu gaaro
Intaas waxaa sii dheer, aqoonsi soo baxaya ayaa sidoo kale lagu soo bandhigi doonaa qeybta hoose ee shaashadda inta wada hadalku furan yahay si aad u ogaato shaashadda aan wax ka beddeleyno, kuwani waxay muujinayaan magaca iyo xallinta labadaba:
La soco aqoonsiga pop-up
Waxaas oo dhami waxay imaan doonaan Xfce 4.12 laakiin wali waxaa jira dadaallo in kasta oo aysan horumar badan sameynin ay xiiso u leeyihiin noocyada mustaqbalka. Tusaale ahaan, waxaa la qorsheeyay in dib loo naqshadeeyo iskudhafka dookhyada miiska isla markaana awood u yeelan karto in lagu doorto waraaqo kala duwan oo muraayad kasta ah, waxay sidoo kale u oggolaaneysaa mawduucyada daaqadda Alt + Tab sida Cinnamon iyo KDE sameeyaan, inkasta oo xilligan aysan dhaafin in yar oo jees jees ah ayaa ah war weyn sida isbeddelada loo tixgelinayo, qaar ka mid ah mashaariicda kale ayaa lagu arki karaa (markale) wiki ka yimid Xfce, haddii la aqbalay ama aan la aqbalin iyo wararka ku saabsan horumarkooda:
Qoraal ma jiro (leh / bilaa muusig)
Iyadoo qoraal ah
Maxaa ii haray inaan dhameeyo? Waa hagaag, aniga ahaan waa ii cadahay in Xfce uu aad iyo aad ugu sii kordhayo ikhtiyaarka jawiga desktop-ka ee tartanka oo aan aad u badneyn ikhtiyaarka iftiinka (oo wali ah) laakiin taasi waxay bedeshay diiraddii ikhtiyaar iftiin ah ikhtiyaar dhameystiran oo desktop-ka casriga oo shaki kuma jiro dhammaan kuwa aan ku raaxeysan isku daygooda inay sidaas yeelaan isla marka nuqulkan cusub la sii daayo (kaasoo ku dhowaad bilowga Maarso haddii wax walba si wanaagsan u socdaan oo aysan jirin khaladaad waaweyn)
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » Feejignaan Naxdin Leh Maxaa Soo Socda Xfce 4.12
58 faallooyin, ka tag taada
hello, hal su'aal: goorma ayaa 4.12 loogu talagalay? Holmes
Sida ku xusan jadwalka http://wiki.xfce.org/releng/4.12/roadmap bisha Maarso
Sidee fiican Xfce .. sidee nostalgic: '(oo waxay ku timaaddaa waxtar wixii aan arko ..)
Haddii aan si hoose u tagi karin Xfce, weli waxaan ku hayaa qaybtayda imtixaanka KDE ee Chakra waxayna umuuqataa inay shaqeyneyso, laakiin markaan dib ugu noqdo jiirka waxaan dareemayaa gurigeyga 🙂
Ahh !! Kaalay chu chu, halkan uga bax fikradahaas maskaxda ku soo qulqulaya .. xDDD
Soo noqo sidii wiil cajaa'ib leh, waad ogtahay inaadan waligaa dareemin xorriyad. LOL
Maya, maya iyo maya .. Waxaan ku fiicanahay hudheelkeyga 7-Star.
Ku noqo gurigaaga
Ku jawaab Oberost
Maya, waan ku raaxeystaa hudheelkan 7-xiddig ee silsiladda KDE SC. Markii aan ka caajisto barkadda, cuntada bilaashka ah, adeegga wanaagsan, iyo dhammaan waxyaabaha raaxada leh, waxaan dib ugu noqdaa aqallada.
Hahahaha, waan arki doonaa, waan arki doonaa… waqtiga ayaa sheegi doona, waad ogtahay in «jiro wax adag oo aan jilicsanayn.
Waa wax aad u fiican. Runtii waan jeclahay waxa ku yimaada Thunar iyo multimonitor (hada waa inaan isticmaalaa ARandr). Laakiin runtii ma jecli culeyska ay ku kordhin doonaan Mousepad. Kaliya waxa aan ka jeclahay waa inay fududahay sida ay tahay. Maxay waxaas oo dhan ugu ridayaan haddii ay jiraan tafatirayaal kale oo horeba u qabtay? Maya, waa inaan rakibo Leafpad (illaa qof uu la yimaado fikradda weyn ee ah inuu waxyeelleeyo isagana)
Ku jawaab Giskard
Haa way fududahay, laakiin waxay ku dhowdahay 4 sano horumar la'aan! Hadda, sidaan marwalba u idhaahdo dhadhanka midabka, xulashooyinka ay imika mousepad bixiso ayaa aniga waxtar ii leh, laakiin way ka fududdahay tifaftirayaasha kale. laakiin kuwa aan ku jirin, warqad-gacmeedkan, oo ah tifaftire qoraal fudud, wuxuu si fiican u qabtaa shaqadiisa.
Waxaan rumeysanahay in beddel ahaan miisaanka yar, caleenta caleenta aan lala tartami karin. Mousepad wuxuu raadinayaa meel u dhaxeysa Leafpad iyo Gedit. Waxay ila egtahay istiraatiijiyad sax ah.
Xfce aniga ayaa ah desktop-ka ugufiican kadib fikirka hooseeya ee KDE xd
Waa mid aad loo habeyn karo isla mar ahaantaana waa mid aad u fudud inkastoo aad arki karto inay qaybo ka maqan yihiin
wax aan jeclaan lahaa inaan arko waa globalmenu 😀
Waxaan rajeynayaa, liddi ku ah, in AAN waligeen arki doonin globalmenu-ka Xfce.
Waa mid kamid sababaha badan ee layga cayrsaday gnome
Aad u xiiso badan oo xiiso leh! laakiin kama aadan hadlin taageerada GTK3: O
marka la soo gaabiyo waa desktop-ka ugu fiican kadib cabsi badan; D
Ku jawaab Helena
aaah waana ka xumahay astaanta dabaysha, waxaan ahay PC O_o amaah ah
Hagaag, i sax haddii aan khaldanahay markaa, laakiin waxaan fahmay in u haajirida GTK3 inaan lagu sameyn doonin 4.12
Waan kugu raacsanahay, XFCE waxay fursad u siineysaa in laga tago ceebaynta iftiinka (iyadoon la joojinaynin iftiinka gabi ahaanba) si aad u noqotid desktop aad u dhameystiran oo tartan leh. In kasta oo ay tahay inaan faallo ka bixiyo iftiinkaasi ma xuma haba yaraatee (in kasta oo ay weli wax badani ka dhiman yihiin).
Waxaan ku isticmaalaa kombuyutarkayga guriga, runtiina waa inaanan wax cabasho ah qabin, taas bedelkeedana Ikhtiyaar aad u fiican kuwa raadinaya wax ka duwan.
Xfce waxay la wareegtay kambuyuutarkayga laptop kadib musiibadii gnome 3 igu kaliftay, hada waxaan isticmaalayaa nooca 4.10 oo xitaa jacayl badan ayaan uqabey jawigan quruxda badan Waxyaabaha xun ayaa ah in hadda maqaalkaaga, waxaan rabaa in 4.12: D ay soo baxdo. Qofna ma garanayaa inta ay qaadanayso wareeggan horumarku? Jadwal kasta?
Sidii aan ku sheegay boostada, bilaabashadu waxay noqon doontaa bilawga bisha Maarso haddii aysan jirin dib u dhacyo, halkan waxaa ah waqtiga loogu talagalay wiki:
Ha noolaado XFCE desktop-ka ugu fiican ee pound-for-pound.
Qof ma ii sheegi karaa waa maxay dulucda qabashada?
Mawduuca aan isticmaalo waa Greybird, laakiin nooca 'GIT' ee Mashruuca Shimmer:
Ahh, xitaa ilmo yar baan daadiyey markaan waxan arkay ... T_T. Waxaan u maleynayaa inay siin doonto Gnome Shell dagaal, waxaan ka tagi doonaa KDE si aan tan u tijaabiyo muddo.
Jawaab Blaire Pascal
Sooooo wanaagsan 😀
Waxyaabaha ayaa si aad ah u xiiso badan ... Marnaba malayn maayo inaan ku dambayn doono jacaylka XFCE
Dhamaad ayuu ku dhow yahay inuu la kulmo.
Kadibna way gaabin doonaan wareegyada sii deynta, weyn.
Astaamahan cusubi waa kuwo aad u qabow, oo ku wanaagsan XFCE.
Ku jawaab fmonroy
Wanaagsan by XFCE. Shaki kuma jiro, aniga ahaan, desktop-ka ugu fiican.
Aad ayaan u jeclahay XFCE laakiin runta ayaa ah, muuqaalka fiidiyaha, iwm .Waxaan u isticmaalaa vlc had iyo jeer si fiican u shaqeysa iyo muusigga geesinimada horey loo yaqaan ee waliba si fiican u shaqeysa, (Weligey maan jeclaan liistada tooska ah, ama abuuritaanka albums toos ah) , iwm). Marka laga reebo adeegyadan, inta hartay ee soo hagaagaysa waxay iga dhigayaan sida 'XFCE' maalin kasta.
Ku jawaab pablo
compgen -c | wc -l
Ku jawaab ernest21
Salaan Rayonant. Aad baad ugu mahadsantahay qoraalkaaga. Waan ku faraxsanahay inaan maqlo wax ku saabsan Xfce. Waxaan kugula talinayaa inaad fiiro gaar ah u yeelato higgaadintaada iyo xarakayntaada: waxaa jira khaladaad dhowr ah oo ku saabsan tildes, kooma, xilliyada iyo mid ka mid ah calaamada su'aal furan.
Sanduuqa digniinta ee bilowga maqaalka, waxaan kugula talinayaa inaadan adeegsan weedho ka bilaabmaya bilaa biin: "Xusuusnow taas ...". Xaaladdan oo kale, akhristaha, markaad miiska fiiriso, wuxuu fahamsan yahay inay leedahay hawsha muujinta macluumaadka muhiimka ah, sidaa darteed waa suurtagal in la iska dhaafo labada daqiiqadood ee aad isticmaaleyso "xusuusnow taas ...". Eeg, halkan waxaan ku qorayaa inay hagaagtay:
Xirmooyinka ayaa wali ku jira tijaabinta lagugumana talinayo jawi deggan maxaa yeelay waxaa laga yaabaa inay mashquul yihiin. Si kastaba ha noqotee, kuwa doonaya inay ka caawiyaan baaritaanka iyo soo sheegista cilladaha, dhammaan koodhku wuxuu ku yaal bogga mashruuca GIT. Isticmaalayaasha Xubuntu waxaa jira ppa-yada horumariyaasha; waa lagama maarmaan in horay loo helo Xfce 4.10 ».
Baaragaraafkaagii hore, ma jirin xilliyo; waxay u muuqatay in sadarka oo dhammi uu ahaa weedh keliya. Halkan waxaa loo qaybiyay saddex weedho, kuwanna iyaguna waxay leeyihiin koomayaal fududeeya akhriska akhristayaasha. Waxaan rajaynayaa inaadan khaladkayga uqaadan wado qaldan. Dhamaanteen waan ku baran karnaa halkan waxaanan jecelahay inaan bixiyo sixitaan maxaa yeelay balooggan wuxuu bixiyaa macluumaad tayo leh; Ma doonayo akhristayaasha mustaqbalka inay aragti xun ka helaan Linux iyada oo la arkaayo qaladaadka qoraalka, xarakaynta, iyo higgaadinta.
Waxaan rajeynayaa inaad sii wadi doonto inaad wadaagto macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Xfce. Salaan.
Ninyahow, inbadan looma waayin, dhaliisha wax dhiseysa marwalba waa la soo dhaweynayaa, runtii waan ka xumahay qaladaadka higgaadinta, ma ahan qaabkeyga, munaasabadaha soo socda waxaan siin doonaa dib u eegis dheeri ah oo lagu saxo taas. tilmaam si loo hagaajiyo. Aad baad ugu mahadsantahay faalladaada, waxaan lahadli doonaa dhexdhexaadiyeyaasha si aan u arko haddii aan tafatiri karo qaybo ka mid ah maqaalka.
Mar labaad waad salaaman tihiin, Rayonant. Ha ka welwelin khaladaadka, marwalba waa la sixi karaa. Dabcan kuwa dhexdhexaadiyeyaasha ah ayaa kuu oggolaan doona inaad wax ka beddesho, uma maleynayo inay diidi doonaan.
Dabcan, waxaa jirtay wax aan ilaaway inaan kuu sheego, laakiin hadda waxaan kuu sheegayaa: khaladaadkaaga sax maahan maxaa yeelay waxaad khaldantay kelmadaha (warqad qaldan), laakiin maqnaansho: adigu ma dhigtid lahjadaha mana meel dhigtid calaamadaha calaamadaha. Xaaladdan oo kale, sixitaanka iyo daryeelka la qaadanayo mustaqbalka ayaa ka fudud: had iyo jeer ka walwal wax ku darista.
Kalsoonow oo fadlan sii wad wadaagida macluumaad dheeri ah oo ku saabsan Xfce.
Kuwii wax ka weydiiyey u guuritaanka GTK3, qaybo ka mid ah ayaa horeyba loogu sii gudbiyey gtk3-engine-xfce, si kastaba ha noqotee kororka isticmaalka kheyraadka iyo iswaafaq la'aanta horumariyeyaasha GTK (kuwaas oo wax ka beddelaya waxyaabaha aasaasiga ah nooc ka mid ah kan kale) ayaa sameeyay horumariyeyaasha xfce (oo uu weheliyo Nick Shermer dusha sare) si aad ah uma cadayn u gudbinta dhammaan xfce nooca 3 ee maktabadaha.
Waxaas oo dhan waxaa looga hadlay si dheer oo ku saabsan liiska dirista, dhab ahaantii qaarkood xitaa waxay soo jeediyeen in nidaamka loo gudbiyo maktabadaha mashruuca Enlighment iyo mid kale oo door bidaya in loo wareejiyo QT. Labada fikradoodba waa ladiiday sababo la xiriira shaqaale yari iyo xasiloonida oo luntay.
Iyo ku saabsan joogitaanka GTK2, goor dhow ama goor dambe ayaa dayactirkeeda laga tagi doonaa, marka GTK3 (iyo horumariyeyaasha) ay qaangaaraan oo aan u baahnayn isbeddel xagjir ah sida hadda dhaceysa.
Ku jawaab cryotope
Kadib liiska hore, isbeddelada lagu fulinayo 4.12 waxay noqon doonaan kuwo si aad ah u ficil ah qaar ka mid ah (sida Terminal leh astaamo hoos u dhacaya) oo ka fogaan doona inay isticmaalaan barnaamijyo ku-meel-gaar ah (kiiskeyga waxaan isticmaalaa guake) iyo kuwa kale waxay u badan yihiin qaab "muuqaal fiican", sida iyagoo ku kala geddisan miisaska kumbuyuutarrada kumbuyuutarrada kumbuyuutarka ah.
Marka laga hadlayo sii-daynta sharafeed, wax badan uma aysan isticmaalin maxaa yeelay noocyadiisii ​​ugu horreeyay (markii uu Cali Cabdala abuuray), runtu waxay tahay inay ku xanuunsato astaamo la'aan.
dhibaatadooda waxay salka ku haysaa degenaanshahooda. Oo weliba hore waxaan u lahaa VLC. Waxaan siin doonaa waqti cusub markii version 4.12 soo baxo.
Mousepad aad ayuu u xadidnaa Waxay ku jirtay qoraalka Windows-ka ee Linux. Inuu dhex maro xoogaa faylal isku dhafan ah oo isaga la socda waxay ahayd riyo cabsi leh. Labada wax ka beddel ee aan u maleynayo inay aniga ii anfaci doonaan waxay noqon doonaan tab iyo tilmaamid jumlo. Hawlaha qaarkoodna waxay ka fadhiisan doontaa VIm.
Si kastaba ha noqotee, haddii qof fiiriyo isbeddelka xirmo kasta wuxuu arki doonaa in qayb weyn oo ka mid ah wax ka beddelka ay yihiin hagaajinno cilad, taas oo sharraxaysa xasilloonida bam-caddeynta ee desktop-ka.
Nooca cusub ee Xfce wuxuu umuuqdaa mid aad u wanaagsan. Waxaan doonayay inaan degganaado Debian 7, laakiin waa inaan dib ugu laabanno tijaabinta, ma doonayo inaan sii joogo aniga oo aan tijaabin noocaas 4.12.
Su'aal doqon ah waxaan weydiinayaa:
Waa maxay habka saxda ah ee loo qoro xfce?
XFCE, xfce ama Xfce
Kaliya u xiiso. Mahadsanid.
Ku jawaab distrozao
Halkan waxaa laga soo qaatay wiki:
«Sidee loogu dhawaaqaa Xfce maxayna macnaheedu tahay?
"Ecks Eff Eee Eee." Magaca Xfce asal ahaan wuxuu u taagnaa XForms Common Environment, laakiin wixii markaa ka dambeeyay, Xfce dib ayaa loo qoray laba jeer mana u adeegsado aaladda XForms mar dambe. Magacii wuu badbaaday, laakiin F-da waa la weyneeyay (ma ahan "XFce", laakiin waa "Xfce"). Xilligaan la soo gaabiyey waxba uma taagna (soo jeedin: X Freakin 'Cool Environment).
Weli waxba lagama sheegin u guuritaanka GTK3?
Casharka 7aad dijo
Runtii waan jeclahay sida xfce u kobcayo, in kasta oo waliba aaladaha maqalka iyo muuqaalka ah aan ka doorbido kuwa kale marka loo eego kuwii hore, sikastaba inta hartay waxay aad ugufiican yihiin waxqabadka iyo dheecaanka, gaar ahaan daraasiinta daaqadaha iyo boosteejooyinka aan furo, talooyinkeyga A waxay noqon doontaa in lagu rakibo Ubuntu, maaddaama Xubuntu uu si fiican u shaqeynayo, laakiin waa inaad ku rakibtaa barnaamijyo kale oo Gnome 3 ah oo ku wareegsan, waxay u muuqataa inay soo daaheen, in kasta oo aysan sidaa u xumayn.
Maanta elav wuxuu fiirinayay jeesjees aad adigu ka sameysay barta elav ee xfce 4.8 iyo sida ay ugufiicnaan laheyd qeybtaan oo leh hufnaan.
Ku jawaab Percaff_TI99
Qoraalku waa laga bilaabo Julaay 7, 2009, waxay kuguula muuqan doontaa wax yaab leh inaan la soo baxo waxyaabahan laakiin hore ayaan kaaga raacay barta kale waana taas sababta aan ugu imid FromLinux, wax kale oo aan raaco waa na tusi desktop oo wali ah mid aad u badan sidaa darteed ay tahay markii ugu horaysay ee waxyaabaha la booqdo ugu badan ee leh 3572 jawaabo, kii aad ku bilaabatay xariiqyadan:
"Ma aqaano haddii ay fikraddan horey u lahaayeen, xitaa ma aqaano haddii aan fulin karno, laakiin maxaan u samaynaynin nooc ka mid ah galabta si aan u aragno sida aan miisaska u haysanno?"
«Tan iyo markii aad bilowdey dunta, aan ka bilowno desktop-kaaga, adaa abuuray, miyaanay kula ahayn?
Hadda wixii ka dambeeya maaha. Aniga ayaa halkan ka diiwaan gashan waxaanan sahminayaa golaha si tartiib tartiib ah, ka dib waxaan dhigayaa 4 miiskeyga halkaan ku yaal.
: O Laakiin Mockup-ku wuxuu ku sugnaa Xfceando .. hagaag .. hadda waan arkaa waxayna iga dhigaysaa fool xumo hahaha
Waad saxan tahay, waxa dhacaya waa inaan kugu raacay bartaada kale, ma aanan ogeyn Xfceando, Mockup-na ma ahan wax fool xun, waxay noqon laheyd in la casriyeeyo wax yar oo xD ah.
Carlos JC dijo
Aad u xiiso badan booska horumarinta XFCE. In kasta oo KDE iyo GNOME ay "ku degdegeen" noocyadooda cusub, XFCE waxay taageertaa horumar aad u dheellitiran. In kasta oo KDE4 iyo GNOME3 ay aad ugu faraxsan yihiin in la fiiriyo oo ay ku jiraan hal-abuurnimo badan oo xiiso leh, waxay sidoo kale wataan dhibaatooyin halis ah oo si taban u saameynaya khibradaha isticmaalaha ...
Ka dib "dhimashadii" GNOME2, XFCE wuxuu noqday DE-ga aan jeclahay, in kasta oo aanan mar dambe isticmaali jirin wax DE ...
Jawaab Carlos JC
Qof ma ii sheegi karaa waxa ay tahay astaamaha astaamaha sawirka tunar?
Ciise ugu jawaab
Iyagu waa faylalka Faenk ee ka dhigaya inay ku tiirsan yihiin Faenza Dark.
Waxay ahayd distoorkii labaad ee aan isku dayo halkaasna waan joogay muddo dheer illaa aan u beddelay debian.
Laakiin haddii ay sifiican u socoto, waxa aan ugu jeclahay waa taageerada muraayadaha loo yaqaan "mousepad schematics" iyo kuwa cusub ee laga bilaabo "thunar" (taas oo aragtidayda ka wanaagsan nautilus).
Ku jawaab Alrep
Ignatius Menz dijo
Soo nooleynta qoraalada ..
Wali waxaan sugeynaa xfce 4.12 🙂
Jawaab Ignacio Menz
Waxaan u maleynayaa inay fikrad weyn tahay in la sameeyo waxa midnimada ay sameysay, liiska caalamiga ah, liiska culeyska badan ee ku dhowaad dhammaan codsiyada oo leh meelo badan oo kombuyuutarrada laptop-ka ah, pixel kasta wuxuu u qalmaa kormeere yar; waa inay hirgeliyaan, mustaqbalka qaar 😉
Ku jawaab eliasmtz
Luis Alejandro CV dijo
xiiso leh waan rakibi doonaa
Jawaab luis alejandro cv
Waa waalan yahay, waxaan rabaa inuu yimaado, Ilaah baan ku dhaartaye, waa wax aad u wanaagsan, kaliya waxa aan doonayo
Waxaan isticmaalay wax aad u yar XFCE, waxaan jeclaa inay bixiso nashqad fudud oo xasilloon, laakiin waxaa jiray waxyaabo aan igu qancinayn waxaan helay qalad tarjumaad oo waxaan soo raray Bugga waana ku faraxsanahay inay ii soo sheegeen in cayayaanka la aqbalay (http://git.xfce.org/xfce/xfdesktop/commit/?id=d5efeebceddef920630ce0551035e20ad65fd461) Sikastaba, qaabkan imanaya ayaa ah mid rajo badan leh waxaan uheli doonaa badal ahaan munaasabada qaar. 😀
Fedora 18 ayaa maqan
Sida loo helo ogeysiisyada dhamaadka fulinta amarka ku yaal terminalka